Arcturus: waa maxay, sifooyinka, taariikhda iyo xiisaha | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 05/01/2022 10:00 | Astronomy
Habeenka gu'ga iyo horraanta xagaaga, goobjooge kasta oo jooga cirifka woqooyi ee Dunida wuxuu dareemi doonaa xiddig dhalaalaya oo cirka jooga, kor u kaca: oranji caan ah, oo badanaa lagu qaldo Mars. Waa Arcturus, xiddiga ugu ifka badan ee kooxda Bootes. Waxaa la og yahay inay tahay xiddigta ugu dhalaalaysa waqooyiga jannada oo dhan.
Sidaa darteed, waxaan dooneynaa inaan u hibeyno maqaalkan si aan kuugu sheego wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Arcturus, sifooyinka iyo xiisaha.
1 Arcturus, xiddigta ugu dhalaalaysa woqooyiga samada oo dhan
2 Tilmaamaha Arcturus
3 Xidig shisheeye
4 Taariikhda qaar
Arcturus, xiddigta ugu dhalaalaysa woqooyiga samada oo dhan
Waxay ku qiyaaseen in Arcturus uu yahay xiddig weyn oo ka digaya waxa qorraxda ku dhici doona qiyaastii 5 bilyan oo sano. Baaxadda weyn ee Arcturus waa natiijada wareegga gudaha ee xiddiga, taas oo ah natiijada da 'weyn. 90% xiddigaha aan ku aragno cirka waxa kaliya oo ay u baahan yihiin in ay ka werweraan hal shay: hydrogen u beddelo helium. Marka xiddiguhu sidaan sameeyaan, cirbixiyayaashu waxay yiraahdaan waxay ku jiraan "aagga isku xigxiga ee ugu muhiimsan." Qorraxdu sidaas ayay yeelaysaa. Inkasta oo heerkulka dusha qorraxda waa in ka yar 6.000 darajo Celsius (ama 5.770 Kelvin si ay u noqoto mid sax ah), heerkulkeeda asaasiga ahi waxa uu gaaraa 40 milyan oo darajo, taas oo ay ugu wacan tahay falcelinta fiyuuska nukliyeerka. Xuddunta ayaa wax yar u koraysa, oo ku urursata helium.
Haddii aan sugno 5 bilyan oo sano, gobolka gudaha ee qorraxda, gobolka ugu kulul, ayaa kori doona si weyn oo ku filan si uu u ballaariyo lakabka sare sida buufinka hawada kulul. Hawada kulul ama gaaska ayaa qabsan doona mug weyn, qorraxduna waxay isu rogi doontaa xiddig weyn oo cas. Iyadoo la tixgelinayo cufkeeda, Arcturus waxay ku jirtaa mug weyn. Cufnaantiisu waxay ka yar tahay 0,0005 cufnaanta qorraxda.
Isbeddelka midabka xiddigta fidaysa waxa sabab u ah in xudunta hadda lagu khasbo in ay kuleyliso meel ka weyn oogada sare, taas oo la mid ah sida jilitaanka isku dayaya in uu boqol jeer ku kululeeyo isla gubanaya. Sidaa darteed, heerkulka dusha sare ayaa yaraada oo xiddiguhuna casaan. Iftiinka cas wuxuu u dhigmaa hoos u dhaca heerkulka dusha sare ee ku dhawaad ​​4000 Kelvin ama ka yar. Si sax ah, heerkulka dusha sare ee Arcturus waa 4.290 darajo Kelvin. Baaxadda Arcturus way ka duwan tahay Qorraxda, laakiin waxay la mid tahay spectrum ee barta qorraxdu. Meelaha qorraxdu waa gobollada "qabow" ee qorraxda, markaa tani waxay xaqiijinaysaa in Arcturus uu yahay xiddig qabow.
Marka xiddiggu si dhakhso ah u ballaariyo, cadaadiska tuujinta xudunta ayaa wax yar siin doonta, ka dibna bartamaha xiddiggu wuxuu si ku meel gaar ah u "xiri doonaa". Si kastaba ha ahaatee, iftiinka Arcturus wuxuu ahaa mid ka iftiimay sidii la filayay. Dadka qaarkiis tani waxay ka dhigan tahay in xuddunta hadda sidoo kale "dib u kicisay" iyada oo helium lagu daray kaarboon. Waa hagaag, marka la eego tusaalahan, waxaan horeyba u ognahay sababta Arcturus uu u bararsan yahay: kulaylka ayaa kor u qaadaya. Arcturus waxay ku dhowdahay 30 jeer qorraxda, si la yaab leh, cufkeeda waxay la mid tahay Astro Rey. Qaar kale waxay ku qiyaasaan in tayadooda ay kor u kacday 50% kaliya.
Aragti ahaan, xiddig ka soo saara kaarboonka helium ee falcelinta fiyuuska nukliyeerka ayaa si dhib leh u soo bandhigi doona dhaqdhaqaaqa magnetic sida qorraxda, laakiin Arcturus wuxuu soo saari doonaa raajo jilicsan, taas oo muujinaysa in uu leeyahay taaj khiyaano ah oo uu wado magnetism.
Arcturus waxay ka tirsan tahay halo ee Jidka caanaha. Xiddigaha ku jira hal-abuurku sida cadceedda oo kale uguma dhaq-dhaqaaqaan diyaaradda Jidka Caano, balse meeshooda ayaa ku jira diyaarad aad u janjeedhsan oo habab fawdo leh. Tani waxay sharxi kartaa dhaqdhaqaaqeeda degdega ah ee cirka. Qorraxdu waxay raacdaa wareegtada Jidka Caano, halka Arcturus uusan raacin. Qof ayaa tilmaamay in Arcturus laga yaabo inuu ka yimid galax kale oo uu ku dhacay Jidka Caano in ka badan 5 bilyan oo sano ka hor. Ugu yaraan 52 xiddigood oo kale ayaa u muuqda inay ku sugan yihiin orbits-ka Arcturus. Waxaa loo yaqaan "Kooxda Arcturus."
Maalin kasta, Arcturus waxa ay ku sii dhawaanaysaa nidaamkayaga qoraxda, laakiin ma sii dhawaanayo. Hadda waxay ku soo dhawaanaysaa 5 kiiloomitir ilbiriqsikiiba. Nus milyan sano ka hor, waxay ahayd xiddig cabbir lixaad leh oo aan la arki karin, hadda waxay u socotaa dhanka Virgo iyadoo ku socota xawaare ka badan 120 kiiloomitir ilbiriqsikii.
Bootes, El Boyero, waa koox-kooxeedka woqooyi ee si fudud loo heli karo, oo uu hagayo xiddiga ugu ifka badan ee kooxda Ursa Major. Inta badan qof kastaa wuu garan karaa qaabka skillet-ka laga dhex sawiray laf dhabarta Big Dipper iyo dabada. Gacanta digsigani waxay tilmaamaysaa jihada Arcturus. Waa xiddiga ugu iftiinka badan dhankaas. Qaar ka mid ah dadka "da'da cusub" waxay aaminsan yihiin inay jiraan Arcturians, jinsiyad shisheeye ah oo horumarsan. Si kastaba ha ahaatee, haddii uu jiri lahaa nidaam meere ah oo ku wareegaya xiddigan, waa hore ayaa la heli lahaa.
Arcturus waxa uu u kululeeyaa dhulka sida ololka shumaca masaafo dhan 8 kiilomitir. Laakin yeynaan iloobin in ay inaga xigaan ku dhawaad ​​40 sano oo iftiin ah. Haddii aan qorraxda ku beddelno Arcturus, indhaheenu waxay arki doonaan 113 jeer oo iftiimaya, maqaarkeenu si dhakhso ah ayuu u kululaan doonaa. Haddii lagu sameeyo shucaaca infrared waxaynu aragnaa inuu 215 jeer ka iftiin badan yahay qorraxda. Isbarbardhigga guud ahaan iftiinkiisa iyo iftiinkiisa muuqda (cabirkiisa), waxaa lagu qiyaasaa inuu dhulka u jiro 37 sano iftiin. Haddii heerkulka dusha sare uu la xiriiro xadiga shucaaca caalamiga ah ee uu dhaliyo, waxaa lagu qiyaasaa in dhexroorku uu ahaado 36 milyan oo kilomitir, taasoo 26 jeer ka weyn qorraxda.
Arcturus waa xidigta ugu horraysa ee la helo maalintii iyadoo la kaashanayo telescope-ka. Cirbixiyeenkii guulaystay wuxuu ahaa Jean-Baptiste Morin, 1635 kii isticmaalay telescope yar oo dib u celinaya Taariikhda la cayimay in la isku dayo hawlgalkan waa Oktoobar.
Marka ay timaado xiddigaha asalka ah, dhaqdhaqaaqa Arcturus waa mid cajiib ah - qaanso 2,29 inji ah sannadkii. Waxaa ka mid ah xiddigaha ugu ifka badan Kaliya Alpha Centauri ayaa si degdeg ah u dhaqaaqa. Markii ugu horreysay ee la dareemo dhaqdhaqaaqa Arcturus wuxuu ahaa Edmond Halley sannadkii 1718. Waxaa jira laba shay oo keena in xiddiggu muujiyo dhaqdhaqaaq weyn: xawaarihiisa sare ee dhabta ah marka loo eego agagaarkeeda iyo u dhowaanshaha nidaamkayaga qorraxda. Arcturus ayaa buuxisay labadan shuruudood.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto Arcturus iyo sifooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Arcturus